Uyenza njani ikholaji ngeefoto | Abadali be-Intanethi
Uyenza njani ikholaji ngeefoto
Olunye lolona yilo luyilayo nolonwabisayo xa uneefoto ezininzi kukwenza ikholaji kunye nazo. Yindlela yokucwangcisa imifanekiso ngendlela yokuba idibane okanye inxibelelane, inika iziphumo ezingcono. Kodwa, indlela yokwenza ikholaji ngeefoto
Ukuba awuzange wenze enye ngaphambili kwaye ngoku ungathanda, ukuba awukho mhle kuyo, okanye ukuba ufuna ukuyenzela umsebenzi, siya kukunika izisombululo zokuwufumana kwaye uwenze eyona ndlela yobuchwephesha enokwenzeka. Masiyenze?
1 Yintoni ikholaji
2 Uyenza njani ikholaji ngeefoto ukuba awunambono woyilo
3 Uzenza njani iikholaji ngeefoto ngokwakho
4 Yenza iikholaji zeefoto ngeeFoto zikaGoogle
Ikholaji inokuchazwa njenge iseti yeefoto ezimele into ethile. Ngokomzekelo, unokucinga ngokukhetha iifoto ezininzi zabantwana bakho uze uzibeke ngokungathi zazivelela. Oko kuya kuba yikholaji, kuba asigxininisi kwifoto enye, kodwa ezininzi ngaxeshanye kwaye yenza uyilo lube nomtsalane ngakumbi, nangona kunokuba nzima ukufezekisa.
Ezi ntlobo zeeprojekthi zenziwa buqu kunye nangobuchule, kwaye njengomzobi okanye umyili woyilo, kuya kufuneka wazi ukuba ujongana njani nomsebenzi wakho kuba unokufunwa ziinkampani, umzekelo kwinethiwekhi zabo zentlalo okanye "malunga us", sithetha ngenkampani kunye nokuvela kwayo, okanye malunga nabasebenzi ngokwabo.
Uyenza njani ikholaji ngeefoto ukuba awunambono woyilo
Kungenzeka ukuba kufuneka wenze ikholaji mhlawumbi ngenxa yokuba ungathanda ukuba nesithombe esimnandi, kuba ufuna ukunika umntu isipho, okanye ngenxa yezinye izizathu. Nangona kunjalo, awunambono ingako yoyilo, okanye awazi ukuba ungajongana njani neenkqubo. Ukuba oko kuyenzeka, akufanele unikezele kwingcamango, kuba Nge-Intanethi ungafumana amaphepha amaninzi akunceda wenze iikholaji ngaphandle kokwazi nto.
Ngapha koko, ekuphela kwento oya kuyidinga ziifoto ofuna ukuzibeka kwaye ucinge ngoyilo ongathanda. Emva koko kufuneka ukhethe itemplate eza kusetyenziswa (eya kuxhomekeka ekusasazweni kweefoto) kwaye uvumele inkqubo yenze umlingo wayo ukukhuphela umphumo.
Amanye amaphepha onokuwasebenzisa ukwenza ikholaji ngeefoto zezi:
Ifotojet. Kuya kufuneka ukhethe kuphela itemplate kwaye ulayishe iifoto ukuze uzenzele ngendlela othanda ngayo. Xa igqityiwe, yikhuphele njengomfanekiso kwaye yiloo nto.
umfoti. Kule meko uya kuba namanyathelo amane, kuba iya kukuvumela ukuba uguqule imvelaphi, umda, iziphumo, ukongeza izitikha kunye neetekisi.
I-PicMonkey. Olunye ukhetho esikunika lona, ​​kwaye luluncedo kakhulu kuba unokuyihlela njengakwingaphambili. Ngokuqinisekileyo, inesilingo samahhala, ukuze emva koku kuya kufuneka uhlawule.
Pixiz. Yenye yezona sizithanda kakhulu kuba unokufumana iitemplates ngokusekwe kwinani leefoto ozifunayo. Ngokubeka inani leefoto kwi-injini yokukhangela, ufumana iitemplates zaloo mifanekiso ethile, egcina ixesha lakho. Ukongeza, inokhetho oluninzi, nangona ilinganiselwe kwamanye amanani.
Uzenza njani iikholaji ngeefoto ngokwakho
Ihamba ngaphandle kokutsho ukuba, ukongeza kumathuba e-Intanethi akunika wona ngeenkqubo kunye nezicelo, zombini simahla kwaye zihlawulwe, kwiPC, ilaptop kunye ne-smartphone, ukwanalo nethuba lokudala olwakho uyilo, ngaphandle kokuxhomekeka nakubani na kunye nokudala. into esuka ku-zero. Akunzima njengoko kunokubonakala kwaye uya kufuna kuphela inkqubo yokuhlela umfanekiso njengePhotoshop, GIMP okanye efanayo (kwi-intanethi okanye efakwe kwikhompyuter yakho).
Los amanyathelo kuya kufuneka uwathathe Zizo zilandelayo:
Yiba nayo yonke imifanekiso oza kufuna ukuyibeka kwikholaji. Ngaphambi kokuba uvule kwiprogram, sincoma ukuba uvule umfanekiso ongenanto, oya kuba ngumphumo wekholaji yakho.
Into elandelayo kukuvula iifoto. Unokuzivula nganye nganye kwaye uzikope ngokwenza iileya ezahlukeneyo kumfanekiso ongenanto (ukuze ukwazi ukuhambisa nganye nganye ngabanye), okanye uvule zonke, udlule uze uvale ezo fayile zemifanekiso.
Ngoku lixesha lokuba uvule intelekelelo yakho. Koko kukuthi; kufuneka uhambise imifanekiso, ubeke omnye phezu komnye (ukutshintsha ulandelelwano lweeleya), kwaye uyiyeke njengoko ungathanda ukuba ibenjalo.
Njengongeziweyo, unokubandakanya isicatshulwa, eminye imifanekiso (efana nezitikha okanye i-emojis, njl.) okanye ubeke isakhelo kuyo.
Ekugqibeleni kufuneka ugcine indalo yakho kunye/okanye uyiprinte.
Nangona amanyathelo abonakala elula kakhulu, kwaye unokucinga ukuba kamva akufani, sele sikulumkisile ukuba ewe, kulula. Yinyani loo nto okokuqala kungathatha ixesha elide, kodwa ukuba unomonde iphelela ekuphumeni kwaye eyona nto ingcono kakhulu kukuba iya kuba yinto ozenzele yona ukusuka ekuqaleni.
Yenza iikholaji zeefoto ngeeFoto zikaGoogle
Ukuba awufuni ukusebenza ngenkqubo, kwaye awufuni kufakela nasiphi na isicelo, okanye undwendwele iiwebhusayithi apho unokusingatha iifoto kuba awazi ukuba bangenza ntoni ngazo kamva (yenye yezinto eziphazamisayo. usebenzisa ezo webhusayithi), emva koko ukhetho onokuthi uluthathele ingqalelo ziiFoto zikaGoogle.
Kwimeko apho ungazi, Olu setyenziso luza lufakwe ngaphambili kuzo zonke iifowuni ze-Android, ke ngenene awuzukufaka nantoni na ebingekho kwiselula yakho.
Ngokwenyani, lusetyenziso olufihlwe ngandlel’ ithile kwiselfowuni yakho kuba awuyi kuyibona ngeliso lenyama. Kodwa ikho. Iza kuvela kunye ne-icon ye-pinwheel, i-blades nganye yombala (obomvu, omthubi, oluhlaza kunye nohlaza okwesibhakabhaka, imibala yeGoogle).
Kuya kufuneka uyicinezele kwaye uya kungena kwi-app. Nika imizuzu embalwa ukulayisha zonke iifoto onazo kwaye xa ubona ukuba igqityiwe, khetha ukuya kwiifoto ezi-9 ezahlukeneyo kwi-reel yakho yeefoto.
Okulandelayo, kuya kufuneka unike uphawu + oluphezulu kusetyenziso. Iza kubonisa imenyu apho "Collage" ivela khona. Ngokukhawuleza ukuba uyinike, le mifanekiso iya kufakwa ngokuzenzekelayo kwikholaji enesakhelo esimhlophe.
Kanjalo, unokongeza umbhalo, izihluzi... kodwa sele sikulumkisile ukuba ayizukuvumela ukuba utshintshe ulandelelwano lweefoto (ukuba ufuna ukuba ubuyele ku-zero kwaye ukhombise iifoto ngendlela ofuna zivele ngayo).
Njengoko ubona, unokhetho oluninzi lokwenza ikholaji ngeefoto. Ngaba ucebisa ezinye?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Uyenza njani ikholaji ngeefoto
Uyila njani incwadana yentengiso
Ungakwenza njani ukuphelelwa lixesha